China FOTON C8L EV mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Yenzelwe iidolophu ezincinci neziphakathi, iyahlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zothutho ezinje ngemigca yesebe ledolophu kunye nothutho lwasemaphandleni. Isimbo saseYurophu esineendlela ezintsha nezikhethekileyo, ezintle nezintsha, zikhokelela kwindlela yokuhamba koluntu.
Inqanaba elipheleleyo 8540 * 2450 * 3000/3100
Isondo lamavili 4450
Ukunciphisa Ubunzima 9.15T
Umkhweli / Indawo yokuhlala 56-67 / 12-31
Ulwakhiwo loMzimba Monocoque, Low-entry / Amanyathelo amabini
Umdibaniso wokuguquguquka, ukufumaneka lula kunye nombutho wendawo yangaphakathi, kunye nokukhutshwa okunguziro, kuchaza iDNA yale bhasi intsha. I-Foton C8L i-EV ibhasi yedolophu ihlangabezana neentlobo ezahlukeneyo zothutho kwimigca yesebe ledolophu kunye nothutho lwasemaphandleni.
Umdibaniso wokuguquguquka, ukufumaneka lula kunye nombutho wendawo yangaphakathi, kunye nokukhutshwa okunguziro, kuchaza iDNA yale bhasi intsha. I-Foton C8L i-EV ibhasi yedolophu ihlangabezana neentlobo ezahlukeneyo zothutho kwimigca yesebe ledolophu kunye nothutho lwasemaphandleni. Ukuqaqambisa isitayile sobuhle esincinci ngaphandle komhombiso omninzi, kudala isazisi kunye nomfanekiso owaziwa ngokulula ngabasebenzisi.
iimagnethi esisigxina iimoto ezihambelanayo
Ukuxhotyiswa ngenkqubo yokulawula izithuthi ezizimeleyo, kunye neminyaka yokusebenza kwezorhwebo, inqanaba lokuzimasa liphezulu.
Ubume besakhiwo esime bumbane
Nge-mileage yokusebenza yeekhilomitha ezingama-80-120 ezinomthwalo opheleleyo, kwaye ngamaxesha angama-2-3 kuphela okutshaja ngosuku kunye neminyaka engama-8-10 yobomi bebhetri.
Ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zothutho kwimigca yesebe lesixeko kunye nothutho lwedolophu.
Inkqubo yokupholisa ubushushu
Ukuqonda ukumiselwa kwesantya esikrelekrele esekwe kwimfuno yemitha yokufezekisa ukusebenza ngokukuko kunye nokugcina amandla.
I-alloy yentsimbi ephezulu isetyenziswa ngamandla aphezulu okuvelisa inyuswe nge-50% kunesinyithi esiqhelekileyo. Ngobushushu obuchanekileyo obuchasene nemozulu kunye nolwakhiwo oluqinileyo, luqinisekisa ukhuseleko lokuqhuba.
Uhlobo lomzimba we-Truss kunye nolwakhiwo oluvaliweyo, kunye namandla e-torsional aphuculwe ngama-50%, ukubonelela umqhubi kunye nabakhweli ngokuqhuba okukhuselekileyo nangokukhuselekileyo kunye namava okukhwela.
I-state-of-the-art electrocoating technique iphucula kakhulu ukusebenza kwe-anti-corrosion kunye nobuhle obuhlala ixesha elide beebhasi.
I-GPS edityaniswe nesiphelo sendlela yokujonga ividiyo iqinisekisa ukuba abasebenzi boLawulo banokujonga indawo ekuyo isithuthi kunye nobume bangaphakathi bebhasi kwaye bajongane nemicimbi kwangoko, njengeemoto ezigqithileyo okanye iimpikiswano zabaqhubi nge-intercom yelizwi
Inkqubo ibonakalisa uyilo olusemagqabini loyilo olusasaziweyo kunye nolawulo oluphakathi, ukuqonda ukwabiwa kolwazi phakathi kwesikhululo kunye nesithuthi, kunye nokwandisa ukufumaneka kwezixhobo ezikhoyo
Inkqubo yolawulo lwebhodi-iTink, eneemveliso zokhuselo lokusingqongileyo, ukuxhasa umsebenzi okrelekrele kunye nenkonzo yabantu, ukudala iqonga lolawulo oludibeneyo lwabantu, iimoto kunye neendlela